1610nm DFB လှိုင်းအလျား Butterfly လေဆာရောင်ခြည် Diode ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > DFB လိပ်ပြာလေဆာရောင်ခြည် > 1610nm DFB လှိုင်းအလျား Butterfly လေဆာ Diode
1610nm DFB လှိုင်းအလျား Butterfly လေဆာ Diode
1610nm DFB လှိုင်းအလျားတည်ငြိမ်သော Butterfly Laser Diodes များသည်စက်မှုလုပ်ငန်းစံ 14-pin butterfly အထုပ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအခေါင်းပေါက်ဆီမီးကွန်ဒတ်တာလေဆာများကိုဖြန့်ဝေသည်။ သူတို့မှာဘက်ပေါင်းစုံ TE အအေးနဲ့နောက်ကျောမျက်နှာအသွင်အပြင်မော်နီတာဖိုဒီodeတွေပါရှိပါတယ်။ သူတို့ကခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်2MHz ရောင်စဉ်တန်းအကျယ်ရှိသည်။ သူတို့၏တစ်ခုတည်းသောကြိမ်နှုန်းရောင်ခြည်ပရိုဖိုင်းနှင့်ကျဉ်းမြောင်းသောလိုင်းအကျယ်တို့က၎င်းတို့အား spectroscopy application များနှင့် telecom applications များအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်စေသည်။ ၎င်းတို့ကို 10mW အထိ output ပါဝါဖြင့်သတ်မှတ်သည်။ လိပ်ပြာအထုပ်တွင် SM သို့မဟုတ် PM fiber fiber pigtail ပါရှိသည်။
1610nm DFB လှိုင်းအလျား၏အနှစ်ချုပ် Butterfly Laser Diode ကိုတည်ငြိမ်စေသည်
1610nm DFB လှိုင်းအလျား Butterfly Laser Diode ကိုတည်ငြိမ်စေသောနိဒါန်း
1610nm DFB လှိုင်းအလျား Butterfly Laser Diode တွင်တည်ငြိမ်သောလက္ခဏာများ
ဆွေမျိုး Intensity Noise (RIN): -145 dB / Hz;
SM သို့မဟုတ် PM ဖိုင်ဘာထုတ်လွှတ်မှု၊
Butterfly လေဆာ Diode ကို 1610nm DFB လှိုင်းအလျားတည်ငြိမ်စေခြင်း
CDWM / DWDM optical ဖိုင်ဘာဆက်သွယ်မှုစနစ်။
1610nm DFB လှိုင်းအလျား Butterfly Laser Diode တွင်တည်ငြိမ်သော 1610nm ၏ 5. Electro-Optical လက္ခဏာများ (T = 25â„)
Parameter သင်္ကေတ အခြေအနေ min ။ စာစီစာကုံး မက်စ် ယူနစ်
လှိုင်းအလျားအလယ်ဗဟို အိုင်စီ TL = 15ï½ž35â "ƒ CW 1609 1610 1611 nm
optical output ကိုပါဝါ PO - 10 - - mW
လက်ရှိ Threshold အိုင်တီ - - 10 35 mA
ဆင်ခြေလျှောထိရောက်မှု ƞ CW output ကို 5mW 0.05 0.11 0.2 mW / mA
operating လက်ရှိ ဟုတ်ပြီ PO = 10 mW (CW) - 100 200 mA
ရောင်စဉ်တန်းလိုင်းအကျယ် LW FWHM -3- MHz
လေဆာရှေ့သို့ဗို့အား VF CW output ကို 10mW - 1.2 3.0 V
အမှောင်လက်ရှိ Monitor ID - - - 0.1 Î¼A
Bandwidth (@ - 3dB) BW - - 2.5 - GHz
Side-mode ကိုဖိနှိပ်မှုအချိုး SMSR CW 35 40 - dB
optical အထီးကျန်မှုတွေ - -10 <+ 70â "" 30 - - dB
ဆွေမျိုး Intensity ဆူညံသံ Rin CW, output ကိုပါဝါ 5mW - -145 - dB
TEC သတ်မှတ်ထားသောအပူချိန် Ts - 15 - 35 ℃
input impedance ZIN - 22 25 28 Ω
Thermistor လက်ရှိ ITC - 10 - 100 Î¼A
Thermistor ခုခံ RTH TL = 25â " 9.5 10 10.5 KÎ©
TEC လက်ရှိ ITEC TL = 25â, TC = 70â '' - - 1.5 A
TEC ဗို့အား VTEC TL = 25â, TC = 70â '' - - 3.5 V
TEC စွမ်းရည် Î” T TC = 70â "ƒ - - 50 ℃
Thermistor အပူချိန် - - - - 100 ℃
လှိုင်းအလျားပျံ့ (EOL) â –³Î » စမ်းသပ်ပြီး
၂၅ နှစ်တာသက်တမ်း - - ± 0.1 nm
လှိုင်းအလျားအပူချိန်ကိန်း Î "Î» / Î" T က TEC အပူချိန်
15âမှာ "35â" မှ - 0.09 - nm / â
လှိုင်းအလျားလက်ရှိကိန်း Î” Î» / Î” Î™ - - 0.01 - nm / ma
1610nm DFB လှိုင်းအလျား Butterfly Laser Diode ၏တည်ငြိမ်သောလှိုင်းအလျား ၆.၁ အထုပ်ပုံနှင့် PIN-OUT အဓိပ္ပါယ် (ယူနစ် - မီလီမီတာ) ။
Butterfly Laser Diode 1610nm DFB လှိုင်းအလျား၏တည်ငြိမ်မှုကိုဖြန့်ဝေခြင်း
A: ကျွန်ုပ်တို့တွင်လှိုင်းအလျား ၁၂၇၀ မှ ၁၆၅၀nm အထိရှိသည်။
Q: output ကိုလိုအပ်ချက်ကဘာလဲ?
A: ကျွန်ုပ်တို့တွင် 10mW နှင့် 20mW ရွေးချယ်စရာများရှိပြီးသင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီလည်းစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါသည်။
A: SM fiber သို့မဟုတ် PM fiber ။
hot Tags:: 1610nm DFB လှိုင်းအလျား Butterfly လေဆာရောင်ခြည် Diode, ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, လက်ကား, စက်ရုံ, စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော
1610nm CWDM 20mW SM သို့မဟုတ် PM Fiber သို့လေဆာဖြင့် 1270nm
DWDM 10mW DFB လိပ်ပြာလေဆာ Diode
10mW 20mW LAN WDM DFB လေဆာရောင်ခြည်
1270nm DFB 10mW လိပ်ပြာလေဆာ Diode
1290nm DFB 10mW လိပ်ပြာလေဆာ Diode